I-Flutter 3 ifika nenkxaso ye-macOS, usetyenziso lweLinux kunye nokunye | Ukusuka kwiLinux
I-Flutter 3 ifika nenkxaso ye-macOS, usetyenziso lweLinux kunye nokunye
Ubumnyama | 12/05/2022 23:50 | Izaziso
KwiNkomfa yakho yoMphuhlisi we-I/O, uGoogle ubhengeze ukukhutshwa kweFlutter 3, inguqulelo yamva nje yomthombo wayo ovulekileyo, isakhelo sophuhliso lwe-UI yeqonga elinqamlezileyo lokwakha ii-apps ezihlanganiswe ngokwendalo. Isakhelo sophuhliso lweFlutter kaGoogle ekugqibeleni ifezekise iminqweno yayo yeqonga elinqamlezayo kunye nokukhululwa okuzinzileyo okuxhasa iLinux kunye neMacOS.
I-Flutter 3.0 inika abaphuhlisi indlela yokubhala izicelo zezona njongo zintandathu zijongene neqonga kubathengi kusetyenziswa ulwimi lwenkqubo yeDart. Singasathethi ke ngezixhobo ezisebhodini.
"Sibhengeza i-Flutter 3, eyisiphetho sohambo lwethu ekuphuhliseni ujongano lomsebenzisi onqamlezayo kwiifowuni, iidesktops, kunye newebhu," utshilo uTim Sneath, umlawuli wemveliso kunye namava omsebenzisi weFlutter kunye neDart. . “Ixesha esathi sasungula ngalo iFlutter kwiminyaka embalwa edlulileyo libuyela umva. Ngokukhululwa kwe-Flutter 1, sasicacile, ubuncinci ngokwembono, nangona kunjalo, ukuba sasingenanjongo yokuba yi-toolkit yeselula. Besifuna ukubonwa njengento enkulu kunesixhobo esijolise kuphela kwiifowuni. ”
“NgeFlutter 2.0 sibonelela ngenkxaso yewebhu kwaye kutsha nje sibonelela ngenkxaso yeWindows,” utshilo uTim Sneatht. “Kwaye ngoku, ngeFlutter 3.0, ekugqibeleni sifikelele kwinqanaba lokuba silugqibe olu hambo. Sinawo onke amaqonga amathandathu aphambili-i-iOS, i-Android, iWebhu, iWindows, iMacOS, iLinux - zonke zixhaswa njengenxalenye ezinzileyo yesakhelo seFlutter.
Ngokukhutshwa kweFlutter 3, iqonga ngoku lixhasa iOS, Android kunye newebhu apps, kunye neWindows, macOS, kunye neLinux desktop apps, zonke njengenxalenye yokukhutshwa okuzinzileyo kweFlutter.
Kwi-macOS, oku kubandakanya inkxaso yokubini jikelele ukwenzela ukuba izicelo zikwazi ukuqhuba ngokwemveli kwi-Intel kunye ne-Apple Silicon chips, ngelixa i-Linux version, i-Google ibambisene neCanonical "ukubonelela nge-cut-edge, inketho yophuhliso oludibeneyo."
Inkxaso ye-Linux kunye ne-macOS ngaphambili yayithathwa njenge-beta kwaye ke ngoko ayifanelekanga ngokukodwa kwizicelo zemveliso. Ngoku uYilo lweMaterial lukaGoogle 3 lusondela ekugqityweni, abo bajonge ukwenza ujongano lomsebenzisi weqonga elinqamlezileyo kulwimi lwe-Android banokuthembela kwiseti yezixhobo ezidityanisiweyo.
Ngaphandle kwenkxaso yedesktop, uninzi lwabaphuhlisi banokujonga iFlutter njengesakhelo sokwakha ii -apps eziphathwayo. Kodwa inani labaphuhlisi bayisebenzisa ngenkuthalo ukwakha ii-desktop zokusebenza, kubandakanya nabasunguli beWunderlist abakhuphe imveliso yabo entsha, iSuperlist, kwi-beta njenge-desktop yeFlutter app.
Enye into entsha kwiFlutter 3 zezona zidityaniso zinzulu kunye neFirebase, Iqonga likaGoogle lokubuyela umva lokwakha ii-apps zeselula kunye newebhu. Oko akususi ukudityaniswa kweFlutter kunye neenkonzo zeqela lesithathu, kubandakanya ne-Firebase ekhuphisana nayo i-AWS Amplify. Kodwa njengoko iqela le-Flutter libonisa, ukuhlanganiswa kwe-Flutter / Firebase ngoku isisiseko esixhaswa ngokupheleleyo se-Firebase kwaye amaqela amabini aceba ukuphuhlisa "inkxaso ye-Firebase ye-Flutter ngokuhambelana ne-Android kunye ne-iOS."
Ngakolunye uhlangothi, IWebhu yeFlutter ngoku izibhaqa ngokuzenzekelayo kwaye isebenzisa i-ImageDecoder API kwizikhangeli ezixhasayo. Ukuza kuthi ga ngoku, uninzi lweziphequluli ezisekwe kwiChromium (Chrome, Edge, Opera, Samsung Browser, njl.) yongeze le API.
I-API entsha cacisa imifanekiso ngokulandelelanayo ukusuka kumsonto ophambili usebenzisa i-codecs yomfanekiso eyakhelwe-ngaphakathi yesikhangeli. Oku kukhawulezisa ukwenziwa kweekhowudi kwisakhelo ngo 2x kwaye akuze kuvimbe umsonto ongundoqo, kususwa konke ukubhloka obekudala ukwenziwa kwezakhelo.
Ukongeza koku, kukwagxininiswa ukuba Iqela liphucule ngakumbi ukusebenza koopopayi yokungafihli kwiimeko ezilula. Ngokukodwa, xa iwijethi ye-Opacity iqulethe kuphela unikezelo lwamandulo, indlela yomgcini edla ngokucelwa yi-Opacity ayihoywa.
Kwibenchmark eyenzelwe ukulinganisa izibonelelo zolu lungelelwaniso, ixesha lokudibanisa le meko liphuculwe ngomyalelo wobukhulu. Kukhupho oluzayo, iqela liceba ukusebenzisa olu lungiselelo kwezinye iimeko.
Okokugqibela, ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngayo, unokujonga kwiinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Izaziso » I-Flutter 3 ifika nenkxaso ye-macOS, usetyenziso lweLinux kunye nokunye